Milkiile Roman Abramovich ma dooneyn inuu IIBSADO Chelsea ee wuxuu doonayay Arsenal….(Sidee wax u dheceen?) – Gool FM
Milkiile Roman Abramovich ma dooneyn inuu IIBSADO Chelsea ee wuxuu doonayay Arsenal….(Sidee wax u dheceen?)
Byare January 6, 2019
(London) 06 Jan 2019. Milkiilaha Chelsea ee Roman Abramovich ayaa 16-sano ka hor iibsaday naadiga Chelsea balse ma ahayn qorshihiisa inuu iibsado Blues ee wuxuu doonayay kooxda dariska la ah ee Arsenal.
Abramovich ayaa iibsan rabay Arsenal balse War moogayaal midowga bangiyada Swiss ayaa uga digay inuu iibsado Gunners.
Sheekadan Cajiibka ay ayaa lagu sheegay buug cusub oo ay qoreen labo qoraa oo wax ku qorta Wall Street Journal.
Buuga ayaa sheegaya in 2003-dii uu Abramovich shaqaaleysiiyay Midowga Bangiyada Swiss ee UBS si ay u baaran dhaqaalaha kooxaha heerka sare ee kubbada Cagta Ingiriiska. Balse iyagaa u baas baxay oo ka hor istaagay inuu iibsado kooxdii uu doonayay inuu iibsado ee Arsenal.
Mid ka mid ah Natiijooyinkii ay soo saareen qolooyinkii wax baarayay ayaa lagu sheegay in Arsenal aysan aslanba iib ahayn.
Abramovich ayaa intaa kaddib u weecday Chelsea oo uu ku iibsaday adduun dhan 1400 milyan wuxuuna ku guuleystay 5-Premier League iyo Champions League.
Buuga ayaa sidoo kale sheegaya in Guddoomiye ku xigeenkii hore ee Arsenal David Dein uu aaminsanaa in milkiilayaasha Arsenal ay kooxda ka iibin lahaayeen Abramovich haddii uu dalab u soo gudbin lahaa, balse waxaa dhexda u galay qolooyinkii uu i dirsaday inay u soo baaraan dhaqaalaha kooxaha England kuwaa oo u sheegay in Gunners aysan aslanba iib ahayn.
“Neymar waxaa heysata dhibaatada la mid ah mida Cristiano Ronaldo oo kale” - Dani Alves